Tsy nisy ny mpitory ary tsy nisy koa vavolombelona hany ka rava hoavy ny fanenjehana. Nohazavain’ilay tovolahy fa ny anton-diany izay niaraka tamin’ny roalahy hafa izay havany ihany dia ny handevina ilay zaza any an-tanindrazany. Rehefa nandalo teo Ambilanibe anefa dia nisy tsaho niely fa avy nangala-jaza izy ireo. Zaza efa maty ary entina halevina anefa izany.
MINISTERAN’NY SERASERA SY NY KOLONTSAINA
Maloto miaraka amin’ny minisitry ny serasera sy ny kolointsaina koa ny ekipany. Sosotra Antananarivo raha nahatsikaritra ny fandokoana izay tsy misy varany akory ny tambohon’Andohalo. Raboussa indray no niharan’ny rihitra amin’ny maha-tale azy eo anivon’ny minisitera. Raha ny marina tokoa mantsy dia vakoka ilay nokitihina ary very ny maha-vakoka azy. Ny mpikarama an’adin’ny minisitera amin’ny facebook anefa dia mbola manambany ny olona ihany ho bevava fotsiny nefa tsy mandray andraikitra.
TOTOAFO NY FITORIANA MOMBA NY CYBERCRIMINALITE
Hipoka fitoriana tanteraka eo anivon’ny sampana « cybercriminalité » ankehitriny. Isan’ny farany nametraka ao ireo mpifankatia taloha izay nampangain’ny ratsy saina amin’ny facebook ho nanodikodim-bola tao amin’ny seranan-tsambon’ny Toamasina. Ilay lehilahy dia nisara-bady mihitsy satria tsy nahazaka ny baraka ny vadiny. Ilay vehivavy kosa indray dia saika namono tena noho ny henatra amin’ny fiaraha-monina. Ny sary mamoafadin’ireo mpifankatia taloha mihitsy no niparitaka ary hitan’izao tontolo izao.
TEZITRA I FIDELE RAZARAPIERA
Tezitra tamin'ny FES i Fidèle Razarapiera ka izay no antony tsy nanaovany ilay adihevitra izay mitondra ny lohahevitra « Velirano, iray taona aty aoriana » izay nokarakarain'io fikambanana izay tohan’ny alemana io. Tsy mbola nanome fankatoavana akory ity solombavam-bahoaka TIM ity ny hanao ilay adihevitra dia efa navoakan'izy ireo tamin'ny dokam-barotra isan-karazany sahady. Tsy nety tamin'i Fidèle anefa izany fihetsika izay tsy miaro fanajàna izany ka nahatonga azy tsy tonga niatrika ilay fotoana.
OLONA 2000 VOASOLOKY
Efa tafiakatra ho roa arivo izao ny isan’ny olona izay voasolokin’ilay tambajotra Maorisiana teto an-drenivohitr’i Madagasikara. Misandoka ho mpiasan’ny ministeran’ny raharaham-bahiny izy ary maka volan’olona etsy sy eroa miaraka amin’ny mpiray tsikombakomba aminy. Fitahina ny olona fa hampidirina hiasa any amin’ny nos Maorisy. Nisy ny nangalàna vola hatrany amin’ny roa tapitrisa ariary. Raha ampitomboina ho roa arivo isa izany dia mazava fa efa miliara maro no azon’ilay tambajotra.
NOFONGARINA NY RAZANA
Tsy namelan’ny fianakavian’ny maty raha tsy nofongarina ny razan’ny havany izay maty teny amin’ny hopitaly ka nolazain’izy ireo fa tsy nisy taova intsony tao anatiny. Vetivety dia nalaza be ity raharaha ity tao Vohipeno ary dia voatery nandray fanapahan-kevitra ny manam-pahefana avy amin’ny OMC ny nanao ny « autopsie » mba hialàna amin’izay mety ho fisavorovoroan-tsaina tao an-toerana ka mety hitarika fitsaram-bahoaka indray. Voamarina fa tao avokoa ireo taova.
NAHOANA NO NIANDRY ELA VAO NITENY
Nivoaka tamin’ny fahanginany ilay vehivavy izay voalaza fa nitsangana tamin’ny maty tao amin’ny hopitaly Hjra. Nolazainy fa very tao anaty fiara fitaterana ny findainy ary iny no nisy nipiraty ka nanelezana ny vaovao. Nolazainy fa fantany hatramin’ilay lehilahy izay tompon’antoka ary tsy iza izany fa lehilahy izay mpanadala azy. Ny mahatalanjona dia maninona no tsy nanao fanazavana avy hatrany izy mba handaminana ny sain’ny olona fa kosa niandry elaela vao niteny ?